“ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်က မက်ဆေ့ပို့ပြီး သူ့ကိုလေးစားကြောင်း ပြသခဲ့တယ်”လို့ ဆိုလာတဲ့ကလော့ – FBV SPORT NEWS
“ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်က မက်ဆေ့ပို့ပြီး သူ့ကိုလေးစားကြောင်း ပြသခဲ့တယ်”လို့ ဆိုလာတဲ့ကလော့
ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်က မက်ဆေ့ပို့ပြီး သူ့ကိုလေးစားကြောင်း ပြသခဲ့တယ်လို့ ကလော့ပြော
ဒီတစ်ခါနည်းပြ Jurgen Klopp ကလော့ပြောတာတော့အဆန်းပါ.။ ဂန္တဝင်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်ကို သူ့ကိုဘယ်လိုလေးစားအသိအမှတ်ပြုကြောင်း မန်ယူနဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ထုတ်ပြောလာပြန်တာပါ။
ဖာဂူဆန်က သူ့ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှချဉ်းကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလာခဲ့တာပါ။Jurgen Klopp ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ဖာဂူဆန်ကို ပြန်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ၊
Klopp ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဖာဂူဆန်က Old Trafford သို့လွှဲပြောင်းရယူရန်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပေမယ့် သူဟာ Borussia Dortmund ကနေ လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူဟာဒေါ့မွန်ကနေ လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီးသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပက်သက်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါက”မန်ချက်စတာမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။တစ်စက္ကန့်တောင်မစဉ်းစားဖူးဘူး”ငါဒီမှာအဆင်ပြေပါတယ်။ ငါမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကကောင်းပါတယ်။”လို့သူကဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးအကြောင်းပြချက်ကောင်းက လီဗာပူးလ်ထကိ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က ရာသီဥတုပိုကောင်းရင်တောင် ကိုယ့်စိတ်ထဲပျော်တဲ့နေရာမှာပဲနေချင်ကြမှာပါ”လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်”
မကြာခင်မှာတွေ့ဆု့တော့မယ့် ခါးသီးပြိုင်ဖက်နှစ်သင်းရဲ့ ပွဲမတိုင်ခင် ကလော့ပ်က ဒီအကြောင်းတွေထုတ်ပြောလာခဲ့တာပါ၊။
ဒါ့အပြင်သူဟာ နည်းပြဖာဂူဆန်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းနေကြောင်းနဲ့ ဖာဂူဆန်က သူ့ကိုဘယ်လိုလေးစားကြောင်းကိုလည်းခုလိုထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်.
“ အဲလက်စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ် “သူစာပို့တယ်ဗျ။ အဲလက်စ်ကသူ့ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ကိုပြတာ။” ဒါကငါ့နံပါတ်အသစ်ပဲ ” လို့စာတစ်စောင်ရတယ်။ wow! ‘။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ”
“မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာဟောင်းဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်နဲ့“ ကျွန်တော်ဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြတာပါ။မကြာခင်ကန်မယ့်ပွဲမှာ သူက ယူနိုက်တက်ကို နိုင်စေချင်သလို ကျွန်တော်ကလည်း လီဗာပူးကို နိုင်စေချင်မှာပါပဲ”လို့ကလော့ကဆိုပါတယ်။